Ike ▷ ver Choputa Ntaneti ▷ ➡️
Jiri ike nghọta na ọmịiko mee ka ike gị bụrụ nke kacha mkpa.
Ihe kaadị tarot pụtara "The Force"
La Kaadị Tarot nke Force na-anọchite anya okike, nke, agbanyeghị n'ọhịa n'ụdị oge ochie ya, bụ nke ezigbo ụlọ na aghụghọ anyị na-azụ n'ụlọ, akụkụ nwanyị anyị, ihe dị anyị n'ime. Ọchịchọ na oke okike nke ọdịdị ebumpụta ụwa anyị ekwesịghị imebi, kama nụchaa ma webata ya, ka ọkwa niile nke okike wee nwee nkwekọ.
La ike nke nwanyi nwere ume ikema ọ bụ na ọ pụrụ ịzụlite ma mee ka ndị ọzọ na-emekọ ihe ọnụ, na-eme ka ume ndị na-enye nsogbu dajụọ site n'ime ka esemokwu dị na mmụọ imekọ ihe ọnụ kwekọọ.
O doro anya na ọdịiche dị n’etiti onwe gị na uche gị.
Kaadị ike na-adụ gị ọdụ ka ị na-adọsi onwe gị ike ma kewaa ọdịmma onwe onye na amamihe. Kpachara anya mee ka a mata gị na ihe a ị gwara gị, ọ bụrụgodị na ọ ga-emegide isi ike gị.
Na-achọ ma na-atụ anya otu ihe ahụ ndị ọzọ nwere ikike na ọnọdụ a. Mba ị nwere ike ịma ha aka ibi na ọkwa dị elu ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya n'onwe gị. Gbanwee ndị ọzọ site n'isetịpụ ihe nlereanya nke iguzosi ike n'ezi ihe. Ebube onwe gi ga abawanye ka ị na-aga nke ọma na mbọ gị.
Igba nke uba
Ndị hụrụ n'anya